ILIFE H70, iyo isina tambo yekuchenesa yawaitsvaga | Gadget Nhau
Rafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | General, Musha
Zvinotaridza kuti "fashoni" inozvimiririra yekutsvaira vachati idanho, kana kwete. Asi panguva imwe chete ivo vari kutumbuka mamwe marudzi emagetsi ekutsvaira ayo anopa zvimwe chiitiko chakavimbika yekuchenesa mudzimba. Zviripachena kuti iwo makuru makuru ekutsvaira ane tambo refu kwazvo akadzika munhoroondo. Uye vanozvimisikidza pamusika isina waya yekuchenesa. Nhasi tinotaura nezvazvo ILIFE H70.
Pfungwa yekutsuka vacuum kune avo vasingavimbe kuti mota diki diki inotora mweya wakadzika makona ese eimba. Pasina kutaura nezve musiyano musimba unogona kuwanikwa pakati pe «conga» mhando yekutsvaira neyekuchenesa ruoko. Kune vazhinji, chishandiso chiri nani kwazvo kuwana kunyatso chenesa kwese chikamu chemba yedu kana hofisi.
1 ILIFE H70 mhinduro yekuchenesa mudzimba
2 ILIFE H70 yeimba yako
ILIFE H70 mhinduro yekuchenesa mudzimba
Kana iwe uchida kunakidzwa ne nzvimbo yakachena pamba uye unonetsekana nekuchichenesa, zvakakosha kuve nerubatsiro rwakawanda sezvinobvira. Pakati pesingaperi mikana iyo yatinogona kuwana nhasi mumusika yatichataura nezvayo ILIFE H70, chigadziriso isina waya, inoshanduka uye ine simba rinopfuura rakaringana. Isu tinowana zvidimbu zvakasiyana uye zvishongedzo kune yega yega nzvimbo uye nzvimbo mumba.
Mubate ILIFE H70 inoshambidza mutengo wakanakisa
Zvichienderana netsvina uye nemhando yepasi yatinogona kushandisa mhando mbiri dzekukweva masimba. Simba Zvakajairika, iyo inotishandira kune chero mamiriro ezvinhu nesimba rekuyamwa 10 Kpa. Kana isu tinokwanisa kumisikidza iyo mode maximum iyo yatichawana nayo simba rekukweva rinopfuura zvakapetwa ne 21 Kpa, zvekuti hapana kana guruva raungapikisa.
Kutenda kwako simba brushless mota isu tichawana masimba ese anodikanwa nenzira yakanyarara. Verenga neimwe nyore-isina tsvina tsvina ine huwandu hunosvika 1,2 litita. Uye zvese zvake zvikamu zvinobviswa uye zvinowachika kunyangwe mudhishi rekuwachira ndiro. Chimiro chayo chakareba uye mubato we ergonomic zvinotibvumidza kupukuta pasi zvakaringana, asi zvakare nzvimbo dzakatwasuka kana matenga.
ILIFE H70 yeimba yako
Imwe yedzakakosha dhata yekufunga nezvayo patinoda kuwana yekutsuka yekuchenesa ndiko kuzvimiririra kwaanogona kutipa isu. ILIFE H70 iri yakagadzirirwa 2500 mAh bhatiri. Kubhadharisa kunotibvumidza yako kuenderera kushandiswa kusvika pamaminitsi makumi mana mu "zvakajairika" maitiro. Uye chii chatinogona kuva nacho 1% inobhadhariswazve mune isingasviki maawa mashanu.
ari zvishongedzo zvemhando ipi neipi yekuchenesaa, pamwe nekutsetseka kwemisoro yayo yakafukidzwa nezvinhu zvisina kukuvadza fenicha kana madziro zvinoita kuti chishandiso chekupedzisira. Swivel inosvika 180 degrees uye kuti zvigaro kana makumbo etafura haana kusiiwa asina kuchena. Iyo ine kunyange kuvhenekera nemwenje yeLED yemakona iwayo nekutadza kuona.
Kana iyo ILIFE H70 isina tambo-yakabata-ruoko yekuchenesa ndizvo zvawanga uchitsvaga riite rako nemutengo wakanakisa pane Aliexpress pasina mitero yekutumira. Usamirira zvakare kuti imba yako iratidzike seyakakodzera sezvainofanirwa. Uye zvakadaro yekupedzisira yekuchenesa chishandiso pasina kushandisa zvinopfuura zvakafanira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » ILIFE H70, iyo isina tambo yekuchenesa yawaitsvaga